समिक्षा Archives - Shuva Bihani
२०७६ मंसिर १०, मंगलवार १८:०४ November 26, 2019 Shuva Bihani Team0
सानैमा आमा गुमाएको र बाबुबाट टाढा भएको एक युवकको मनोदशा कस्तो होला ? बाबुले जबरजस्ती विदेश पठाएका कारण हङकङ पुगेका युवाहरु ११ वर्षपछि फर्केर आउँदा नेपालप्रति कस्तो व्यवहार गर्लान् ? के उनीहरु नेपालमै हुर्केको जस्तो व्यवहार गर्लान् ? वास्तविक जीवनमा कस्तो मनोदशा होला । त्यो फरक पाटो हो । तर, ‘चच हुई’ मा भने यो […]
नायिका कंगना रनावत अब चलचित्र निर्माण गर्दैछिन् । उनले, केही समय अगाडि नै आफू निर्माता बन्न लागेको उल्लेख गरेकी थिइन् । उनै, कंगनाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राम मन्दिर विवादको बिषयमा चलचित्र बनाउने भएकी छिन् । उनले ‘अपराजित अयोध्या’ नाममा चलचित्र निर्माण गर्दैछिन्, जसको लागि उनले भारतको टप स्टूडियोसँग कुराकानी पनि अगाडि बढाइसकेकी छिन् । […]